The itinyekwu Hacks Autowebinar System - Foneelu Of The Day
One of isi nzuzo banyere-eme autowebinars na-emeso eziokwu na i na-enye bụ otu ihe ahụ set nke ozi ka a ìgwè mmadụ nke ga-ewere ihe niile ị dị nnọọ kwuru nnọọ ụzọ dị iche iche.
Na dị ka ndị dị otú ahụ, ha ga na-eme ihe ha mụtara ha azụmahịa azum.
Mgbe ị na-aghọta na, ị ga-achọpụtawo isi atọ na-ere a mma foneelu hacks autowebinar.
Ọ niile abịa ala gị script.
Buru n'uche na a siri ike script ọ ekere òkè na ya na-ekwu okwu ka onye mkpa nke ndị ndị họọrọ eri na ihe ọmụma gị.